Small Steps Live for God lead for Nations!
HomendlamaOther StoriesNepalMissionSend Us To Nepal – EnglishSend Us To Nepal – Nepaliखुशी हुने बानीबाइबल शिक्षाA more Effective Way to Train Pastorsभरपूर जीवनभरपूर ज्योतिभरपूर ज्योति – पाठ १ देखि ५ सम्मभरपूर ज्योति – पाठ ६ देखि १० सम्मभिडियो शिक्षाछोरीका भिडियोहरूप्रवचन कसरी प्रचार गर्नेसाना कदमहरूवचनहरूसन २०१५ मा दिएका सन्देशहरूजनवरी २०१५फेब्रुअरी २०१५मार्च २०१५एप्रील २०१५मे २०१५जुन २०१५सन २०१६ मा दिएका सन्देशहरूजनवरी २०१६फेब्रुवरी २०१६मार्च २०१६एप्रील २०१६मे २०१६जुन २०१६जुलाई २०१६
इसाइहरूलाई सताउनु र विरुवामा मल हाल्नु उस्तै उस्तै हो। विद्यालयमा साना साना नानीहरूलाई कण्डमको बारेमा अध्यापन गराउनु बालअधिकार ठान्ने तर धर्मको बारेमा अध्ययन गराउँदा बालअधिकार हनन भएको ठान्ने समूह बास्तवमा समाजका धमिराहरू हुन्। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँमाथि विश्‍वास गरे, तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्‍वरको सन्‍तान हुने हक दिनुभयो। यूहन्‍ना १:१२ Jul19
Posted by	ndlama	सबै असलथोकको अन्तिम श्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसैले प्रत्येक इसाइले सबै कुराको सुरुवात प्रार्थनाबाट गर्नुपर्छ। प्रार्थना इसाइहरूको दैनिक जीवन जिउँने शक्ति हो, यो स्टेज बनाएर उफ्रिने अल्छेहरूको खेलौना होइन । सबै रोगहरू निको पार्ने पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, तर उहाँको निको पार्ने विधि हजार हुन्छन्। उहाँले निको पार्नलाई एउटा सानो बालकको प्रार्थनादेखि लिएर चर्चमा कुचो लगाउने […]
श्यर गर्नुहोस्:TweetLike this:Like Loading...	Read More →
Posted by	ndlama	उपप्रधानमन्त्री मैनालीले टिप्पणी गर्नुभएको छ कि “बालगृहमा धर्म परिवर्तन वढ्दो छ।” उहाँको टिप्पणी एक किसिमले सत्य छ। द्वन्द्व कालमा पीडित बालबालिकाको उद्वारकोलागि इसाइहरूले खोलिएको बालगृहहरूको तथ्याङ्क बढ्दो छ। त्यो अर्थमा बालगृहमा धर्म परिवर्तन पनि बढेको देखिन्छ। अल्पसंख्यक इसाइहरूले गरीव बालबालिकाको उत्थानकोलागि राष्ट्रको समेत ध्यान खिच्ने गरी बालगृहहरू संचालन गरेकोमा म गर्व गर्दछु। वास्तवमा त्यतीले मात्र […]
बालअधिकार, समाजको धमिराहरू
Posted by	ndlama	धार्मिक आस्थाहरूकोबारेमा सिक्न पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हुन्। मेरो छोराछोरीलाई इसाइ आस्थाका साथसाथै हिन्दु धर्म, बुद्ध धर्म, ग्रीक धर्म जस्ता अन्य आस्थाहरूकोबारेमा अध्ययन गराइ रहेको छु। हिन्दु धर्म तथा बुद्ध धर्मकोबारेमा सिकाउने बालबलिका केन्द्रिन पुस्तकहरू नपाएर दुःख पाइ रहेको छु। तपाईसँग छ भने मलाई चाहिँएको छ। मैले ४ कक्षा रामायण अध्ययन गरेको थिएँ, त्यतीखेर म […]
बालअधिकार, समाजका धमिराहरू
Posted by	ndlama	कहिलेकाहिँ भन्न मन लाग्छ, नेता बन्न मन लागे मान्छे काट्नु, जेल जान मन लागे गाइ काट्नु। के इसाइहरू साँच्चिकै दोस्रो दर्जाको नागरित नै हुन त? के यिनीहरू अपराधीहरू नै हुन् त? यिनीहरूले आफ्नो आस्थाको बारेमा खुलेर कुरा गर्न पाइदैन? माओ मानेर दाजु भाइ काट्न पाइयो, विज्ञान मानेर गर्भको शिशुको हत्या गर्न पाइयो, हिन्दु मानेर राज्य कोशबाट […]
धर्म निरपेक्ष, धार्मिक स्वतन्त्रता, बाल अधिकार, समाजको धमिराहरू
Posted by	ndlama	श्यर गर्नुहोस्:TweetLike this:Like Loading...	Read More →
Posted by	ndlama	सन १८०० को दशकमा दुइजना समकालीन व्यक्तिहरू न्यूयोर्क शहरमा बसेका थिए। ती दुईमा एकजनाले परमेश्वरमा विश्वास गर्न इन्कार गर्छ आफू खुशी जीवन जिउँन थाल्छ। उनले छाडा यौन जीवनलाई अंगाले। उनले कुनै नीति र नियम विनाको जीवन जिए। तर दोस्रोले अनुसासित तथा नमूनाको जीवन जिउँन छाने। त्यो व्यक्ति एउटा पास्टर बने। उनले आफ्नो जीवनकालमा कयौ पुस्तकहरू […]
Posted by	ndlama	ख्रीष्टमस तथा नयाँ वर्ष २०१६को उपलक्षमा विश्वभरी छरिएर रहनुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहँन्छु। बाइबलले भन्छ, “वचन मानिस हुनुभयो र हाम्रो बीचमा बास गर्नुभयो। उहाँ अनुग्रह र सत्‍यले भरिपूर्ण हुनुहुन्‍थ्‍यो। हामीले उहाँको ठूलो महिमा देख्‍यौं। उहाँले पाउनुभएको महिमाचाहिँ पिताको एकमात्र पुत्रलाई सुहाउने महिमा थियो।” यूहन्‍ना १:१४। यहाँको जीवनको अध्यारोमा उहाँ मानिस भएर उज्यालो छर्न […]
fire, happy new year 2016, marriage, merry Christmas, sex, ख्रीस्टमसको शुभकामना, घरको धुरी, नयाँ वर्षको शुभकामना, यौन, विवाह
Posted by	ndlama	परमेश्वरले हामीसँग सम्बन्ध राख्न चाहँनुभयो। उहाँले हामीलाई सम्बन्ध राख्न सक्ने व्यक्ति बनाउनु भयो। जब हामी सम्बन्धमा जिउँछौ तब हामी बलियो बन्छौँ। बाइबलले भन्छ, “तिमीहरू परमेश्‍वरको नजिक आओ र परमेश्‍वर पनि तिमीहरूको नजिक आउनुहुनेछ। पापीहरू हो, आफ्‍ना हात धोई सफा गर। कपटीहरू हो, आफ्‍नो मन शुद्ध पार।” याकूब ४:८
intimate relationship with God, परमेश्वरसँगको घणिस्ट सम्बन्ध
पास्टर अगुवाहरूलाई उत्साहो पत्र
Posted by	ndlama	पास्टरहरूकोलागि १० वटा ठूला ज्ञानका शब्दहरू प्रिय पास्टरहरू, म पनि तपाईहरूमध्ये एक हुँ। मैले ३९ वर्षसम्म स्थानिय मण्डलीमा सेवा गर्दै आएको छु र विगत २९ वर्षदेखि एउटै चर्चमा सेवा गर्दै आएको छु। जवान अवस्थामा नै सेवामा लागेको भएतापनि परमेश्वरले मलाई सबै समय सुरक्षित राख्नुभयो। विगत केही हप्तादेखि मैले महसुस गर्दै आएको छु कि तपाईहरूलाई एउटा […]
Posted by	ndlama	पहिला मलाई सरकार धेरै घास खाने अनि थोरै दुध दिने भैसी जस्तो लाग्थ्यो तर अब मलाई सरकार र साडे उस्तै उस्तै लाग्न थाल्यो भन्या। झर्ने केही होइन तर खानलाई छोड्दैन। म सरकारको आदर गर्छु तर अब सरकार प्रति मेरो शुन्य भरोसा छ। सरकारले सताउन जानेको छ भन्ने कुरामा सत प्रतिशत विश्वस्त छु तर सरकारले आफ्नो […]
Posted by	ndlama	बाटरस्टेप्स एम-१०० क्लोरिन जेनेरेटर – सजिलो, सानो, प्रभावकारी एम-१०० एउटा पानी शुद्ध पार्ने प्रणाली हो, यसले इल्क्ट्रोलाइसिसद्बारा क्लोरिन उत्पादन गर्छ। यसको लागि अलिकता खाने नून र १२ भोल्टको व्याट्री वा सोलार प्यानल भए पुग्छ।यति भए यसले ३८००० लिटर पानीलाई शुद्धपार्न चाहिने जति क्लोरिन उत्पादन गर्छ – जुन झण्डै १०,००० मानिसहरूलाई पुग्छ। पानी शुद्धिकरणको बेलामा निस्केको […]
Posted by	ndlama	विधिदासले (विधिको दास) जीवनको आनन्दपूर्ण सेवालाई तहसनहस पार्दछ। विधिदास यति विनासकारी हुन्छ कि यसले हामीलाई तिते करेली नै बनाउँछ। यसले जीवनका आनन्दहरू सबै खोसेर लैजान्छ। हामीले अरूको सेवा गर्दा जुन आनन्द महसुस गर्छौ, त्यसको स्वाद नै थाहा नपाउने गरी बोधो बनाइ दिन्छ। वास्तवमा विधिदासलाई सेवा वा मिनिस्ट्रिलाई सखाप पार्ने सलह नै मान्न सकिन्छ। विधिदास भनेको […]
Posted by	ndlama	असल कार्य गरे शत्रुले पनि कदर गर्दछ। हिन्दु धर्मालम्बीहरू, बुद्धिष्ट धर्मालम्बीहरू र अन्य धर्मालम्बीहरू हाम्रो शत्रु होइनन्। औलामा गन्न सकिने केही भतुवा हिन्दुवादीहरूले मेडियामा विरोध जनायो भन्दैमा हामीले हरेस खाने कुरै हुन्न। साह्रा हिन्दु मित्रहरूमा उहाँहरूको जस्तो गैह्र जिम्मेवारी भावना तथा स्वभाव छैन। यी भतुवाहरूले बास्तवमा हिन्दु अस्तित्वको वदनाम गरीरहनुभएको छ। आफ्नो स्वार्थ पूर्तीकोलागि कहिले […]
Posted by	ndlama	कानले काग लग्यो – ए होइन होइन – कागले कान लग्यो भन्दा दौडनेहरूको जमातमा उहाँ जस्ता तथ्यलाई ठम्याउने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, “म एक हिन्दू ब्राहमण हुँ । म आफ्नो धर्मप्रति वफादार छु तर सही र गलत छुट्याउन सक्छु । अन्जु पन्तले केही गल्ती गरेकी छैनन् । धन्न सहनसिल रहिछिन् अन्जु पन्त । आफ्नो गल्ती नभएको […]
Posted by	ndlama	मानिसहरूलाई हृदयमा राख्दा हामीलाई प्रार्थना गर्न हतार लाग्छ र प्रार्थना गर्नेहरूले असल सम्बन्ध स्थापना गर्छ अनि असल सम्बन्धमा जिउनेहरू खुशी भएर जिउँछन्। तपाई असारको हिलोमा गाउँदै रम्न सक्नुहुन्छ या सिरकको तातो भित्र सुतेर रुन पनि सक्नुहुन्छ। कति धेरै धनी श्रीमान, श्रीमतिहरू बेखुशी भेटिन्छ साथै धुप्रै मुनामदनहरू पनि भेटिन्छ। किनकि खुशीको जग असल सम्बन्ध होः नाम, […]
church, ndlama, Nepal
Posted by	ndlama	यो पतित संसारमा लोभी हुन कसैलाई सिकाउँन पर्दैन। यो त मानिसको स्वभाविक चरित्र हो। संसारका सबै मानिस बढी पाउन अनि सम्पन्न बन्न दौडी रहेका छन् र क्रूसमा झुन्डिएको येशूका दासहरूले समृद्धि, चंगाइको भरमा सेवा गर्न खोजे ती मानिसहरूले येशूको वलिदानलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न चुक्छन्। जसरी दाइजो हेरेर विवाह गर्ने श्रीमानले आफ्नो श्रीमतिलाई माया गर्न चुक्छ […]
विभिन्न विषयहरू	Bible Study (14)
विगतका पोस्टहरू	विगतका पोस्टहरू